यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ ? सावधानी अपनाउनु भन्दै आयो यस्तो सूचना – List Khabar
Home / समाचार / यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ ? सावधानी अपनाउनु भन्दै आयो यस्तो सूचना
यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ ? सावधानी अपनाउनु भन्दै आयो यस्तो सूचना
admin December 1, 2021 समाचार Leaveacomment 133 Views
काठमाडौ । यदि कतै यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जारी गरेको बुलेटिनवारे जानकारी लिन आग्रह गरिएको छ । सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी तथा गण्डकी प्रदेशमा आजको मौसम सामान्यदेखि पूर्णतया बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । यसबाहेकका भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने मौसमविद्ले जानकारी दिएका छन् ।
Previous अन्ततः जेठाजुले स्विकारे बुहारी र छोरी, जेठी श्रीमती पनि सगै बस्न तयार (भिडियो हेर्नुस)
Next पर्सी शुक्रबार देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय